Raisulwasaaraha Magacaaban oo Maanta Hortagaya Baarlamaanka Soomaliya – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Raisulwasaaraha Magacaaban oo Maanta Hortagaya Baarlamaanka Soomaliya
Maanta oo Arbaca ah Taariikhdana ay ku beegan tahay 1/3/2017 waxaa xarunta golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho ka furmaya Kalfadhiga kowaad ee mudanayaasha baarlamaanka Federaalka Soomaliya.
Kalfadhigaas ayaa lagu wadaa in la horgeeyo Raisulwasaaraha Magacaaban ee Xukuumadda Federaalka Soomaliya, Xasan Cali Kheyre.
Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in shaqada ugu horeysa ee Barlamaanka Soomaaliya uu qaban doono marka uu isku soo laabto ay noqon doonto ansixinta Ra’iisul wasaaraha cusub.
Haduu helo codka kalsoonida Xildhibaanada baarlamanka Soomaliya waxa u soo dhisi doonaa Xukuumadda Soomaliya, hadii dib loo celiyo Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa laga sugayaa in uu soo magacaabo Raisulwasaare cusub.
27-kii December 2016 ayey soo bilowdeen howlaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya xiligaasi oo wadajir loo dhaariyey Xildhibaannada labada aqal balse furitaanka rasmiga ah Kalfhiga 1aad ee Golaha Shacabka ayaa maanta oo Taariikhdana ku beegan tahay 01-March-2017 furmaya, waxaana si rasmi ah u furi doona Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.